FIMPIMA FOIBE | FI.MPI.MA
Nahavita dingana lehibe ny FI.MPI.MA. « Miforitra anaty sy malahelo » no nilazana ny literatiora malagasy tamin’ny fiandohan’ny fanjanahantany. Nanakona ny kolontsaina malagasy ny sivilizasiona nentin’ny Frantsay sy ny Fanjakana kolonialy. Nezaha...
Faha-20 taona : Sampana FI.MPI.MA. "Hanitra Nentindrazana" - Ambohipo
Roapolo taona izay no nananganan'ny Mpitandrina RAKOTOBE Rajaomanjato sy ny Jeneraly RAMAKAVELO Désiré Pilippe ny Sampana "Hanitra Nentindrazana" ao...
Fiaraha-miory noho ny fodiamandrin’ny Filoham-boninahitra RATOVO Ravalison Gaston
Tontosa tamim-pahamendrehana ny fandraisana sy fandevenana ny nofo mangatsikan’ny Filoham-boninahitra FI.MPI.MA., izay nanorina ny fikambanana 50...
Akon'ny faritany - Akon-dia tany ivelany
Ireo lohahevitra nodinihana nandritry ny fikaonan-doha iraisam-pirenena momba ny kabary
« Trandraka an-tanimena, hono, ka ny volon-tany no arahina » Atoa Pascal Aquien, Filoha lefity ny Oniversite La Sorbonne, no nandahateny voalohany...
Ivon’ny fankalazana ny faha dimampolo taona tany am-pitandranomasina 21-26 avrily 2014 tao Paris
Fanokafana ny ivon’ny fankalazana tao amin’ny Centre International de Séjour de Paris salle des Congrès Paris 21 avrily tolakandro. Nanamarika...
Misokatra ho anao sy ny betsaka ity... - par andrge le 18/11/2011
Fony teny amin’ny Sekoly Fanabeazana Fototra no nanombohany niantsehatra tamin’ny kabary, tsapany ho mandeha ila ihany anefa ny fahalalany tamin’ny kabary koa namafisiny izany rehefa tonga tao amin’ny « Lycée Moderne Ampefiloha » izy. Teo an-tokonan...
“Matin-drobon’ny adrisa ka fola-pen’ny aketalahy” : Anarana iantsoana ny vavy amin’ny karazam-balala iray ny adrisa. Tsara sy mahafinaritra ny sorany: mainty sy vony. Vaventiventy kokoa izy noho ny lahy aminy, izay antsoina hoe aketa na aketalahy. Manintona ny bika sy ny soratr’adrisa ka maha-te hisambotra. Enjehina fatratra izy raha vao tazana, ary tsy avela raha tsy azo na dia hahafola-pe aza. Mazàna anefa raha dodon-kisambotra loatra, dia tsy mahavaka ny adrisa amin’ny aketalahy ka rehefa mby an-tanana ny haza vao ketraka sy diso fanantenana, eny sosotra mihitsy aza raha toa ka aketa no azo sy namonoan-tena fa tsy adrisa. Ampiasaina io ohabolana io handatsana olona mora adalain-java-mamiratra ivelany ka manao izay hahazoana izany na toy inona na toa inona hasarotany, na toa inona na toa inona tombam-bidiny. Harena natao fafin-katrana sy aim-beri-maina anefa no niafarany satria tsy araka ny noeritreretiny ary tsy nahitany soa na dia kely akory aza ilay zavatra nimatimatesany sy nandriany ilika ary nandaniany herim-po. "Mirobona hanampy ny efa misy toy ny ahitra maniry an-jezika " : Ongotana sy ariana ny ahitra matetika, fa anisan’ny fako raha maniry eny amin’ny voly. Raha eny amin’ny zezika kosa anefa dia ongotana ka alevina ho zezika ihany. Ampiasaina io ohabolana io eo amin’ny zavatra betsaka tsy dia ilaina loatra, nefa azo angonina hanasoavana zavatra hafa. Abéline Eléonore
Natao ho hitsikitsika hivavahana, kanjo voromahery nipaoka ny akoho - Izy rehetra
Fantaro ireo fitadidy
6 jona 2014 : Famoahana ny andia ao Toamasina 6 jona 2014 : Famoahana ny andia ao amin’ny...
Hafatra avy amin’ny Vaomiera Manonana ny Zaikabe (VMZ)
Ny 21 ka hatramin’ny 26 jolay 2014 no hanatanterahana ny Zaikabe faha III-n’ny Fikambanan’ny...
Fantaro ireo fitadidy :
29 marsa 2014 : Fitsangatsanganana Faritany FI.MPI.MA. Antananarivo 21, 22, 23 marsa 2014 :...
Volana ÔKTÔBRA 2013 : Fankalazan’ny Faritany FI.MPI.MA. Antsirabe ny faha-50 taon’ny FI.MPI.MA.Ny...
Alahady 21 jolay 2013 : Fivoriam-be ny Faritany FI.MPI.MA. Antananarivo, fandraisana ho mpikambana...
Fantaro ireo fitadidy Volana Jona 2013 Sabotsy 1 jona 2013 : fanombohana ny...
DIARY KANTO I
DIARY KANTO II
DIARY KANTO III
Soridalan-komban-kahatsangy HASIN-KABARY 1
FI.MPI.MA : AKON-GAZETY
Mpianatra kabary andiany roa no niara-naboaka ofisialy - (De Ino Vaovao)
Des avantages appréciables - (De L'express Mada)
Les jeunes conquis par le kabary - (De L'express Mada)